Mandrindra ny varotra manerantany ho an'ny marika iray any amin'ny firenena 23 | Martech Zone
Amin'ny maha marika manerantany anao dia tsy manana izany ianao maneran- mpihaino. Ny mpihaino anao dia misy mpihaino isam-paritra sy eo an-toerana. Ary ao anatin'ny tsirairay amin'ireo mpijery ireo dia misy tantara manokana azo raisina sy hotantaraina. Ireo tantara ireo dia tsy miseho majika fotsiny. Tsy maintsy misy ny fandraisana andraikitra hikarohana, hisambotra ary hizara azy ireo. Mila fifandraisana sy fiaraha-miasa izany. Rehefa mitranga izany dia fitaovana matanjaka mampifandray ny marikao amin'ny mpihaino manokana anao. Ka ahoana no fomba fiarahanao miasa amin'ireo ekipa manana firenena 23, fiteny dimy fototra, ary faritra 15?
Fananganana marika manerantany mifanaraka: ny zava-misy miaraka amina antontan-taratasy torolàlana marika 50 pejy
Ny torolàlana amin'ny marika dia zava-dehibe amin'ny fitazonana marika tsy miova. Ampahafantarin'izy ireo ny ekipao hoe iza, inona, nahoana, ary manao ahoana ny marika. Saingy ny antontan-taratasy 50 pejy an'ny fenitry ny marika fotsiny dia tsy hampitombo marika manerantany. Sombin-javatra iray ihany ity mila ampiarahina amin'ny tantaran'ny mpanjifa sy ny atiny hampitana azy ireo.
Moa ve ianao nanambola fotoana sy vola be tamin'ny fandraisana andraikitra amina marika manerantany mba hahitanao ireo ekipanao erak'izao tontolo izao ho tsy mandray andraikitra? Ny torolàlana marika lehibe fotsiny dia tsy handray ekipa eran'izao tontolo izao aorian'ny famoahana iray. Na dia manana ny lalàna rehetra aza izy ary mijery tsara, dia mbola tsy tonga amin'ny fiainana izany. Ary na dia miaraka amin'ireo asa mahafinaritra mitranga aza dia tsy misy ny ezaka tena hizarana manerana ny firenena.
Ny marika manerantany dia tokony hamidy amin'ireo mpihaino eo an-toerana sy isam-paritra ary hatoky ireo ekipan'ny varotrao hanao fampielezan-kevitra eo an-toerana
Ny olon-kendrenao dia tsy ny olon-drehetra. Tsy misy mpihaino “manerantany” iraisan'ny ekipa azonao ifantohana. Ny mpihaino anao dia misy mpihaino marobe eo an-toerana. Rehefa manandrana mivarotra amin'ny olona rehetra mampiasa fiteny sy sary mitovy aminy ianao, dia miafara amin'ny sary stock cliché izay tsy misy ifandraisan'ny olona. Ny famelomana ny ekipa marketing tsirairay manerana ny firenena 23 hisambotra sy hizara ireo tantaran'ny tsirairay ireo dia ho lasa fototry ny marika vaovao sy nohatsaraina.
Ny tantaranao manerantany dia misy tantara eo an-toerana
Ny marika manerantany dia tsy azo atao arabe tokana ivelan'ny foibe. Zava-dehibe ny torolàlana sy ny tari-dàlana avy amin'ny foibe, saingy ny paikadinao manerantany dia tsy tokony tsy hiraharaha ny sandan'ny olona akaiky ny mpihaino resahin'ilay marika. Tokony hisy ny fifanakalozana hevitra sy atiny eo amin'ny foibe sy ny ekipa manerantany. Manitatra ny tratry ny marikao izany ary manome ny ekipa manerantany hanana ny marika.
Ity karazana filozofia "mamela ny famoronana" ity dia tsy manome hery ny ekipa eo an-toerana ihany fa manome tantara sy atiny manara-penitra ho an'ny ekipa isam-paritra ary koa ny foibeny. Miaraka amin'ny hevitra bebe kokoa sy fizarana atiny, vao mainka mirindra sy velona ny marika.
Mampifandray ireo ekipa marketing manerana ny firenena 23
Rehefa miasa manerana ny zana-potoana 15 samy hafa ianao dia tsy afaka hiantehitra amin'ny antso mba ho hany fitaovam-pifandraisan'izy ireo, indrindra rehefa miatrika ny foto-drafitr'asan'ny firenena an-dàlam-pandrosoana izay mety hiteraka antso matetika. Ny fametrahana maodelim-panompoan-tena dia ahafahan'ny ekipa miditra amin'izay ilainy, rehefa ilain'izy ireo izany.
Tokony hatsangana ny ekipa a Fitantanana nomerika digital (DAM) system. Ny rafitra DAM dia toerana mora idirana sy azo idirana izay ahafahan'ny tsirairay miditra na mandray anjara amin'ny atiny. Manamora ny fizarana tantara sy atiny izany. Ny famoronana lanja ho an'ireo mpivarotra miasa mafy ireo dia nanampy tamin'ny fampitomboana ny rafitra ara-organika, izay nianjeran'ilay marika marika tsy miankina.
Ny rafitra DAM dia miasa ho ivon'ny atiny afovoan'ny ekipa rehetra. Manome azy ireo hery hampifandray sy hanara-maso ny atiny misy ny tantara voarain'izy ireo, ary manome mangarahara amin'izay amboarin'ny ekipa hafa izany. Ny fampiasana rafitra DAM dia manome hery ny foibe, ekipa eo an-toerana, ary ny hafa hiara-miasa - fa tsy hiasa irery.
Ahoana ny fampifandraisan'ny fitantanana fananana dizitaly amin'ny firenena 23
Manakarama mpaka sary eo an-toerana hakana ny tantaran'ny mpanjifa, ary hampiasana ny sary amin'ny fampielezana marketing eo an-toerana. Saingy tsy mijanona eo izany. Azo alaina ao amin'ny rafitry ny DAM ny sary ary zahana amin'ny metadata kalitao sy voatendry. Azony atao ny mampiasa azy ireo ho an'ny sampana hafa, mailaka mivantana avy amin'ny antoko fahatelo, ary ny foibe ho an'ny tatitra isan-taona. Ny fanovana ny fifantohana amin'ny fanamafisana orina ny ekipa mpivarotra eo an-toerana dia nanampy tamin'ny fanaparitahana hevitra, nanaparitaka fampielezan-kevitra momba ny varotra ary nizara tantaram-pahombiazana.
Tags: Fitantanam-panananamarikatohodranon'ifitantanana fananana nomerikamaneran-marika manerantanyhihamalalaka
Nate Holmes no mpandrindra marketing Widen Enterprises ary ny azy Smartimage fanitarana marika. Nate dia liana amin'ny fitantanana marika, marketing amin'ny atiny ary famakafakana marketing. Nate dia faly miara-miasa amin'ireo olona tsy mitovy fiaviana amin'n'ny fandaminana amin'ny habe rehetra, miainga amin'ny ekipa fifandraisana amin'ny varotra amin'ny orinasa lehibe kokoa ka hatramin'ny talen'ny orinasa lehibe sy salantsalany.
Balaonina, gum gum, ary martech: iza amin'ireo no tsy tompon'andraikitra?